IBon Voyage Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguDil
I-Bon Voyage Cottage yeyona ndawo imnandi, ikhabhathi yelog yangoku enokunikelwa yiTobermory. Le ndlu ibekwe kumbindi ikuhambo olufutshane ukusuka kwiitoni zezinto eziluncedo kunye nokuqhuba nje okufutshane kuzo zonke iindawo ezinomtsalane ezijikeleze iTobermory. I-cottage ibonelela ngoyilo lombono ovulekileyo kunye nefenitshala entsha kraca ukuze uhlale ngasemva kwaye uphumle. Ukusuka kumdlalo wenyani wenyani ukuya kwitafile yepool, sinayo yonke! Ikhitshi nayo iza igcwele ngokupheleleyo i-assortment ebanzi ye-kitchenware onokuyifuna. Incwadi ngoku, awuyi kuzisola!
Le ndlu isanda kwakhiwa igcwele yonke into oyifunayo ukuze uyonwabele kwaye ugqithise ubulindele. Umgangatho wokuqala unendawo yokuphumla evulekileyo ebandakanya indawo yokuhlala, ikhitshi, indawo yokutyela, igumbi lokuhlambela kunye namagumbi amabini okulala. Umgangatho wesibini ubandakanya enye indawo yokuhlala, igumbi lokulala elikhulu kunye negumbi lokuhlambela.
Yonwabela ubusuku obupholileyo obujikeleze umgodi womlilo ngasemva kwendlwana yenza i-s'mores kunye nokwabelana ngamabali othusayo. Yiba nentsasa emnandi ngelixa usenza isidlo sakusasa kwitafile yepatio ngaphandle kwidesika yangaphambili okanye ukhuphe i-barbecue eshedini ukupheka ezinye iibhega ngesidlo sasemini.
Indawo yokuhlala 1:
Indawo yokuhlala ekumgangatho wokuqala inika i-sofa entle, epholileyo kunye ne-intshi ye-60 yeTV ebekwe eludongeni. Idityaniswe kumabonwakude yinkqubo yokudlala eyinyani, inkqubo yokudlala yePS5 kunye nenkqubo yethiyetha yesandi ejikeleze isandi sasekhaya. Indawo yokuhlala ehonjiswe kakuhle iza nejam egcwele imidlalo yokusela, imidlalo yebhodi kunye neencwadi zemibala yabantwana kunye neenoveli ukugcina abancinci bexakekile!
Emva kwendawo yokuhlala kukho indawo yokutyela. Indawo yokutyela inomtsalane, itheyibhile yesidlo somthi esiqinileyo ehlala i-6 kunye nezihlalo ezi-2 ezongezelelweyo ukuba ziyafuneka.
Ikhitshi ifika ilungile nayo nantoni na kunye nayo yonke into onokuyidinga ukubetha nakuphi na ukutya okufunayo. Kubandakanya iipleyiti, izitya kunye nesilivere kunye neseti epheleleyo yeembiza, iipani, izitya kunye neemela. Ukulungiselela iindwendwe, sikwabandakanye umenzi wewaffle, i-tupperware yezinto ezishiyekileyo, iketile, itoaster nokunye. Inxalenye enkulu yekhitshi yi-assortment yeeglasi zokusela. Kukho ii-cubborts ezimbini ezigcwele iiglasi zewhiskey, iiglasi ezidubulayo, iiglasi zechampagne, iiglasi zewayini kunye neeglasi zejusi. I Kitchen ikwabandakanya uhlelo olukhethekileyo umenzi wekofu we-Keurig (kwaye wenza i-lattes kunye ne-cappuccinos) ngee-pods ze-K-cup zasimahla kubo bonke abathandi bekofu! Kukho iilebhile kuzo zonke ii-cubborts ukuze iindwendwe 'zazi kakuhle apho yonke into ikhoyo.
Isiqithi ekhitshini sikwanazo 8 izitulo ezijikelezayo apho unokonwabela ukutya kwakho ukhululekile.
Amagumbi okulala omgangatho wokuqala:
Kukho amagumbi ama-2 kumgangatho woku-1. Igumbi elinye lifakwe i-queen bed kwaye elesibini liza neebhedi ezimbini ezinendawo yokuhlala abantu abayi-4. Amagumbi ahonjisiwe ukuze iindwendwe zizive zikhululekile kwaye zilungile ekhaya. Amagumbi aquka izibane zetafile ezichukumisayo ezikwanamazibuko e-USB kunye neendawo zokuthengisela iindwendwe ukuze zihlawule izixhobo zazo zobugcisa.
Igumbi lokulala elikumgangatho wesibini:
Umgangatho we-2 ubandakanya igumbi lokulala elikhulu elifakwe iibhedi ezi-2 zokumkanikazi. Eli gumbi likwabandakanya isibane setafile esichukumisayo kunye nezibuko ze-USB kunye neevenkile zokubiza naziphi na izincedisi zobuchwepheshe.
ZONKE iibhedi ZIZA NEEMASHITI ENGCACILEYO NAYE ENTOLULEKO KUHLALA NGAMNYE!
Indawo yokuhlala ekumgangatho wesibini:
Lo mmandla uquka itafile emnandi ye-pool. Yonwabela kwaye udibanise ngelixa udlala imijikelo embalwa yeebhiliyoni okanye i-snooker kwitafile yephuli. Iza ne-assortment ye-pool cues kunye netshokhwe kunye nebhodi yamanqaku ukugcina umkhondo wamanqaku. Ukukhapha i-pool table yisofa etofotofo ngendlela emangalisayo. Khululeka esofeni ngelixa ubukele umabonwakude kumabonakude angama-55” kwaye udlale umculo kwibar yesandi yeSamsung okanye ude ulinde ithuba lakho lokuvula itafile.
Iigumbi zokuhlambela ezi-2 ezigcweleyo:
Izindlu zokuhlambela zihlala zicocwa ngaphambi kokuba zihlale. Beza neetawuli ezithandekayo, iphepha langasese, isepha kunye neshampoo yokulungisa imeko ukonyusa intuthuzelo yokuhlala kwakho. Iibhafu nazo ziza neentloko zeshawa entsha kunye namanzi ashushu/abandayo ukuze wonwabele ishawari epholileyo nepholileyo.
Le cottage inegumbi lokuhlamba impahla elinesepha kunye nesithambisi.
I-cottage yonke yenzelwe kwaye iququzelelwe ukwandisa induduzo. Sijoyine iintsuku ezimbalwa kwaye uzibonele ukuba i-hype ingantoni!
\_u00A0Iibhedi ezinkulu eziyi-2, oomatrasi abampontshwayo abayi- 2
Ubumelwane buzolile kwaye buzolile. Konwabele ukuhlala kwakho ngasese ngokupheleleyo. Iimbono zeScenic nazo zonke kodwa kukuhamba nje okufutshane.
Ukuba ufuna nantoni na konke konke, nceda ungalibazisi ukuqhakamshelana nam. Ndikho, ndifumaneka 24/7.